पृथ्वी नारायण शाहको जीवनकाल : शाहलाई किन राष्ट्र निर्माताको उपमा दिने र मेटाउने समेत गरिन्छ ? « News24 : Premium News Channel
नेपाल एकीकरण अभियानको पुर्णविराम चाँही यिनका पनाती राजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहका पालमा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध जस्लाइ एङ्गलो-नेपाल युद्ध (१८१४?१६) पनि भनिन्छ पछी भयो ।उक्त युद्धमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता बचाएपनि धेरै ठूलो विशाल नेपालको इलाका जसमा पश्चिमक्षेत्रमा हालको भारतको उतरान्चल राज्य , हिमन्चल राज्य तथा पन्जावमा पर्ने केही साना सतलज नदी पारीका पहाडी रजौटा समेत पर्दथे भने पुर्वमा दार्जीलिङ, देखी लिएर टिष्टा नदी सम्मको तराइ तथा पहाडी भुभाग ब्रिटिश इस्ट इण्डिया कम्पनि सरकारलाई सुगौली सन्धी अन्तर्गत सुम्पनु पर्यो सिक्किममाथीको अधिकार पनि त्याग्नु पर्यो । तर ब्रिटिश ले नेपाललाई १८२२ मा मेची देखी राप्ती सम्मको तराइ तथा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको क्रियाकलापबाट खुशी भएर राप्तीदेखी माहाकाली बिचको तराइ भुभाग १८६० मा फर्काएका थिए । भारत ब्रिटिसबाट स्वतन्त्र भएपछि सुगौली सन्धि खारेज भइ नेपालको भु भाग त्यागनु पर्नेमा हाल ती भुभाग हडपेर बसेको छ। उनले नेपाल एकीकरणको महायात्रा सुरू गरी कैयौं स्थानलाई नेपाल राष्ट्रमा गाभेर ४ वर्ण र ३६ जातको फूलबारीको सृष्टि गरे ।
-भौगोलिक रुपमा नेपाल एकीकरण गरेकाले शाहलाई राष्ट्र निर्माताको उपमा समेत दिने र मेटाउने गरिएको छ ।
लोकतन्त्रपछि औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय एकता दिवस नमनाएको सरकारले यसवर्ष भने मनाउने निर्णय गरेको छ । पृथ्वी नारायण शाहलाई कतिपयले राम्रो दृष्टिले हेरेपनि कतिपयको हेराईमा भिन्नता अहिले पनि छ । शाहको आलोचना मात्रै हुने गरेको छैन नश्ल र एकल धर्म र सम्प्रदायको वर्चस्व स्थापित गरेको भन्दै राष्ट्र निर्माता भन्न नसुहाउने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउन गरेको निर्णय नै फिर्ता लिन विज्ञप्तिमार्फत माग नै गरेको छ ।
अनसन बाजेको अहंकार: कम्युनिष्टको सत्तोसराप, कांग्रेसको गुणगान ! (भिडियोसहित)